Joël 2 BDS - Yoɛl 2 AKCB
1Hyɛn torobɛnto no wɔ Sion;
hyɛn abɛn no wɔ me bepɔw kronkron no so.
Ma wɔn a wɔte asase no so nyinaa ho mpopo,
efisɛ Awurade da no reba,
na abɛn koraa.
2Sum ne kusukuukuu da.2.2 Sum…da. Sum yɛ daa daa adiyisɛm a wɔka fa Awurade da no ho. (Amos 5.18; Sef 1.15).
Omununkum ne sum kabii da.
Sɛnea adekyee hann trɛtrɛw wɔ mmepɔw so no,
saa ara na asraafo a wɔdɔɔso na wɔyɛ den ba no te.
Wonhuu wɔn sɛso bi da,
na wɔrenhu ne sɛso nso da.
3Ogya rehyew wɔ wɔn anim,
ogyatannaa dɛw wɔ wɔn akyi,
asase a ɛda wɔn anim no te sɛ Eden turo,
nea ɛda wɔn akyi no te sɛ nweatam,
hwee nguan wɔn.
4Wɔte sɛ apɔnkɔ.
Wohuruhuruw te sɛ apɔnkɔsotefo asraafo.
5Wɔyɛ gyegyeegye te sɛ nteaseɛnam
na wotu fa mmepɔw atifi,
wɔte sɛ ogyatannaa a ɛhyew nwuraguanee
wɔte sɛ asraafo akantinka a wɔrekɔ ɔsa.
6Aman ani bɔ wɔn so a, ehu bɔ wɔn;
na wɔn anim hoa.
7Wɔko kɔ wɔn anim te sɛ akofo;
wɔforo afasu te sɛ asraafo
na wɔn nyinaa kɔ wɔn anim tee,
na wɔmman benkum anaa nifa.
8Wontwintwan wɔn ho wɔn ho anan mu;
obiara nantew kɔ nʼanim tee.
Wobu fa abandennen so,
na wɔpem kɔ wɔn anim ara.
9Wɔtow hyɛ kuropɔn no so
wotu mmirika fa afasu no so
wɔforo kɔ afi mu,
wɔfa mfɛnsere mu te sɛ akorɔmfo.
10Asase wosow wɔ wɔn anim,
na ɔsoro hinhim.
Owia ne ɔsram duru sum,
na nsoromma nhyerɛn bio.
11Awurade bobɔ mu
de di nʼasraafo no anim.
Nʼakofo no dɔɔso bebree,
ahoɔdenfo ne wɔn a wodi nʼahyɛde so.
Awurade da no yɛ kɛse na ɛyɛ hu;
hena na obetumi agyina ano?
12“Na afei,” sɛnea Awurade se ni,
“San fa wo koma nyinaa bra me nkyɛn,
wɔ akɔnkyen, osu ne awerɛhow mu.”
13Sunsuan wo koma
na ɛnyɛ wo ntade mu.
San bra Awurade wo Nyankopɔn nkyɛn,
efisɛ, ɔyɛ ɔdomfo, ne yam ye.
Ne bo kyɛ fuw na ne dɔ boro so,
na ɛnyɛ no anigye sɛ ɔtwe yɛn aso.
14Hena na onim? Ebia ɔbɛsesa nʼadwene na wahu mmɔbɔ
na wagyaw nhyira,
a ɛyɛ aduan ne ahwiesa afɔrebɔde
a mode ma Awurade mo Nyankopɔn no.
15Hyɛn torobɛnto wɔ Sion!
Mommɔ akɔnkyen kronkron ho dawuru,
16Mommoaboa nnipa no ano
montew nhyiamu no ho na ɛnyɛ kronkron;
mmofra ne mmea a wɔrema nufu ano.
Ma ayeforo ne ayeforokunu mfi wɔn pia mu mmra.
17Asɔfo a wɔsom wɔ Awurade anim no,
nsu wɔ afɔremuka no ne abrannaa no ntam;
na wɔnka se, “Awurade fa wo nkurɔfo ho kyɛ wɔn.
Mma wʼagyapade nyɛ ahohorade
anaa fɛwdi wɔ aman no mu.
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wubisa wɔ nnipa no mu se,
‘Wɔn Nyame no wɔ he?’ ”
18Na Awurade bɛtwe ninkunu wɔ nʼasase ho
na ne nkurɔfo ayɛ no mmɔbɔ.
19Awurade bebua se,
“Merebrɛ mo aduan, nsa foforo ne ngo,
a ɛbɛso mo ama moamee pintinn.
Merenyɛ mo ahohorade
mma aman no bio.
20“Mɛpam atifi fam asraafo no afi wo nkyɛn akɔ akyirikyiri,
mepia wɔn akɔ asase a awo na ɛyɛ kesee so.
Nifa dɔm no bɛmem wɔ Nkyene Po no mu,
na kyidɔm no bɛmem wɔ Ntam Po no mu.
Na afunu no bɛbɔn
na ne nka betu.”
Nokware wayɛ nneɛma akɛse!
21Munnsuro, me nkurɔfo!
Momma mo ani nnye, na monsɛpɛw mo ho.
Nokware Awurade ayɛ nneɛma akɛse.
22Munnsuro, mo wuram mmoa!
Efisɛ sare so adidibea reyɛ frɔmfrɔm.
Nnua no resow wɔn aba;
borɔdɔma ne bobe nso resow wɔn aba.
23Momma mo ani nnye, mo Sion mma,
Munni ahurusi wɔ Awurade mo Nyankopɔn mu,
efisɛ watɔ asusowsu ama mo,
ne nokwaredi nti.
Watɔ osu bebree ama mo
wɔ ne bere mu te sɛ kan no.
24Aduan bɛyɛ awiporowbea hɔ ma,
nsa foforo ne ngo bebu so wɔ kyi amoa mu.
25“Mɛhyɛ mo anan mu,
mfe dodow a mmoadabi bɛsɛee mo nneɛma,
mmoadabi akɛse ne nkumaa,
ne wɔn a aka no nyinaa,
me dɔm a mesomaa wɔn baa mo so no.
na mubeyi Awurade mo Nyankopɔn din ayɛ.
Ɔno na wayɛ anwonwade ama mo;
me nkurɔfo ani renwu bio.
27Afei, mubehu sɛ, mewɔ Israel,
mubehu sɛ mene Awurade, mo Nyankopɔn,
na obiara nni hɔ sɛ me;
Me nkurɔfo ani renwu bio da.”
28“Na akyiri no,
mehwie me honhom agu nnipa nyinaa so,
mo nkwakoraa bɛsoso adae,
mo mmerante benya anisoadehu.
29Saa mmere no mu no,
mehwie me Honhom agu
mʼasomfo so, mmarima ne mmea.
30Mɛyɛ anwonwade wɔ ɔsoro ne asase so,
mede mogya, ogya ne wusiw kumɔnn.
31Ansa na Awurade da kɛse no bɛba no, owia beduru sum na ɔsram nso ayɛ sɛ mogya.
32Na obiara a ɔbɔ Awurade din no,
wobegye no nkwa.
Efisɛ nkwagye bɛba
ama wɔn a wɔanya wɔn ti adidi mu
a Awurade afrɛ wɔn
wɔ Sion bepɔw so ne Yerusalem nyinaa,”
sɛnea Awurade aka no.
AKCB : Yoɛl 2